September-article – zibonele fm
Izitalato zommandla wase Khayelitsha zigutyungelwe ngumhluzi welidle. Sekulithuba Abahlali bommandla waseKhayelitsha behlala kwiZitalato ezigubungelwe ngumhluzi welindle, ngenxa yoko abantwana abaninzi bathi bagule ngezigulo ezinxulumane nalemeko yokuphuphumala kwelindle ezitalatweni. Kwiziganeko ezibini ezohlukileyo kummandla wakoH kwase Khayelitsha abahlali bemizi emibini eyohlukileyo bangqinelana ngezityholo zokuba iMoto zohlangulo lindle zithatha ixesha elide ukufika, kuthi ngoku sele ifikile ingakwazi ujongana nezinye ezisondelene nalapho ziya khona kuthwe mabayo bika kwiOffice sebe lezogutyulo lindle khonukuze bancedakale nabo, bayekwa bengancedwanga.
Indawo zokuthengisa nokoja inyama ezimiliselwe ezitalatweni nazo zidada kwilindle kwizitalato ezininzi. Omnye wabahlali base Makhaza uthe “ akukhonto singayenza kuba lentlalo sele siyiqhelile, kodwa noxa kunjalo ivumba lona aliqheleki konke-konke noxa ndidlula kule nyunyu xa ndisiya emsebenzini” omnye wabahlali base Site B yena uhambise wathi. “ sihlala njenge zilwanyana, akukho mntu ofanelwe kukuhlala kule meko sihlala kuyo. Yokujanyelwa nokunukiselwa lilindle”. Noxa kunjalo abahlali akukhonto banokuyenza ngokwabo ukusombulula lenyewe, kwaye kubonakala ingathi abazo ncedakala kwamsinya.
Ilungu le komiti kasodolophu kweliKapa uXanthea Limberg ucacise wathi. “isixeko seliKapa lifumana amakhulu amathathu ezikhalazo ezinxulumene nokuphuphumala kwelindle kwisixeko jikelele, oku kudalwa kukulahlwa kwezinto ngokungekhosemthethweni ezidala ukuxinga kobumdaka ze kugqabhuke imibhobho, ngeba zonke ezizikhalazo ziphendulwa ngesiquphe ntonje sibethwa linani lezikhalazo ezingenayo Nanto edala uxinzelelo ekulungiseni ngethuba lenyunyu egubungele isixeko”.
Kutsho oka Limberg ebongoza abahlali uba bathathe uxanduva lokujongana nezindawo zidala lomonakalo streets as it will surely infect vegetable, meat, toys sold on the streets, lastly if the is a blockage or burst in pipes that obviously means faeces will contaminate the water and it will be dangerous for people to drink.- said Dr Kabalo Abahlali abaninzi bahlangabezana nale nyewe ngenxa yokungqongophala kwezindlu zangasese ezinganelanga, uphuhle watsho njalo ugqirha wesibhehlele esizinze eKhayelitsha. “okukuphuphumala kwelindle kubangela izigulo ezininzi, ezayanyaniswa nentsholongwane eziziswa lilindle. Ngakumbi ebantwaneni namanina akhulelweyo, kunye nabantu abanezigulo ezifana eSwekile enentsholongwane kagawulayo.
Ezintsholomgwane ziphuma kwilindle zithi zihlale kweziqhamo nemifino, kunye nezinto zokudlala abantwana zithengiswa esikolweni, Kananjalo ezintsholongwane zithi zityhafe amanzi aselwa luluntu”. Utshilo ugqirha uKabelo.